प्रवास – Page 16 – Halkaro
नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छौँः जिवा लामिछाने
चितवन, मंसिर २४ । गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष एवंम संरक्षक जीवा लामिछानेले नेपालमा लगानी गर्न गैरवासीय नेपालीहरु इच्छुक रहेको बताएका छन् । चितवन उद्योग संघले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले पछिल्लो समय नेपालीहरुमा आत्मविश्वासी बन्दै लगानी गर्न तर्फ प्रेरिरत रहेको बताए । विदेशमा बस्दा जति पैसा […]
रोजगारीको क्रममा जापानमा ज्यान गुमाएका केसीको परिवारलार्इ नौ लाख सहयोग
स्याङ्जा, मंसिर २३ । रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा ज्यान गुमाएका जिल्लाको अर्जुनचौपारी–९ केवरेका दीपक केसीको परिवारलार्इ करिब ९ लाख रूपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ । स्याङ्जा जापान सहयोग समाजले केसीकी अामालार्इ बुधबार आठ लाख ९० हजार रूपैयाँ सहयोग हस्तान्त्ररण गरेको हो । स्याङ्जा जापान सहयोग समाजका उपाध्यक्ष सागरमणि भण्डारीका अनुसार स्याङ्जाबाट रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहेका सहयोगीहरूसँगबाट […]
दिवंगत पत्रकार कर्ण बोहराकी श्रीमतीको उपचारका लागि क्यानाडाबाट सहयोग
प्रकाशित मिति : २०७३, २१ मंसिर मंगलवार December 6, 2016
काठमाडौँ, मंसिर २१ । अमेरिका तथा क्यानडामा बस्दै आएका नेपालीले दिवङ्गत पत्रकार कर्ण बोहराकी श्रीमती ममता बोहराको उपचारका लागि सहयोग प्रदान गरेका छन् । दुबै मृगौला खराब भइ काठमाडौँको भेनस अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ममतको सउपचारका लागि अमेरिका र क्यानाडामा सङ्कलित एक लाख ६० हजार रूपैयाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पठाएका छन् । पत्रकार तथा आर्थिक सहयोग […]
सिड्नीमा नेपालीहरूबीच भलिवल प्रतियोगिता हुने
सिड्नी । यहि डिसेम्बर ११ तारिखका दिन अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा होल्म्स कप भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ। भलिबल खेलसँग जोडिएका नेपाली युवाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देस्यका साथ ग्लोबल कन्सल्टको सहकार्यमा पोखरा भलिबल क्लबले सो प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको हो। म्यारिकभिल स्थित पी.सी.वाई.सी हलमा सम्पन्न हुन लागेको उक्त प्रतियोगितामा ८ टिमले भाग लिने छन् […]
पर्यटन दुत हुन कृते पत्रः एउटै चलानी नं. का दुर्इ पत्र बुझाएर लिए गुरूङले नियुक्ति
पोर्चुगलको अवैतनिक दुतावासबाट दिइएको पत्र । पोर्चुगल । पोर्चुगलका लागि नेपाली पर्यटनदुत नियुक्तिको प्रकरण यहाँको नेपाली समाजको सबैभन्दा चर्चाको बिषय भएको झन्डै एक साता बितेको छ। एक साताको लामो अनुसन्धान पछि पोर्तुगलका लागि नेपाली पर्यटनदुत नियुक्ति र यस सम्बन्धमा उठेका बिबादमा थप रहस्यका प्रमाणहरु फेला परेका छन्। पोर्चुगलका लागि नेपाली पर्यटनदुत को हुदैछन भन्ने समाचार […]
कतारले दिएको अाममाफिको योजनामा नेपालीको सहभागिता न्यून
काठमाडौँ । कतार सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा बस्दै आएका आप्रवासी कामदारलाई दिएको आममाफीमा कम नेपाली सहभागी भएर फर्केका छन् । आफ्नो कम्पनी (स्पोन्सर) छाडेर बाहिर काम गर्दै आएका गैरकानुनी हैसियत भएका कामदारलाई बिना सजाय स्वदेश फिर्नको लागि कतारले तीन महिना (१ सप्टेम्बरदेखि १ डिसेम्बर)सम्म आममाफीको समय दिएको थियो । आममाफीको समय बिहीबारबाट सकिएको छ । ‘आममाफीमा […]
समाचार प्रभावः ममताको उपचारका लागि खुत्रुके फोडेर सहयोग
प्रकाशित मिति : २०७३, १६ मंसिर बिहीबार December 2, 2016
काठमाडौँ, मंसिर १६ । पत्रकार कर्ण बोहराको निधन पछि उनको विरामी श्रीमतीको उपचारको अभाव भइरहेको छ । पत्रकार बोहराकी श्रीमती ममता यतिवेला भेनस अस्पतालको ४०४ नं. कोठामा उपचाररत छिन् । नजिकैको बुहारीलार्इ कुरिरहेकी छन् कर्णकी अामा हर्का देवी । बूढेसकालको साहरा छोरोलार्इ दैबले लगेपछि अब हर्काको लागि छोरो भने नी बुहारी भने नी यीनै […]
रोजगारिका लागि भारत गएका सुपका नेपाली किन हुन्छन् वेपत्ता ?
प्रकाशित मिति : २०७३, १६ मंसिर बिहीबार December 1, 2016
कञ्चनपुर, मंसिर १६ । भारतमा मजदुरी गर्न यहाँका मानिसहरू वर्षेनी वेपत्ता हुने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाबाट रोजगारिका लागि भारत गएका १४१ जना बेपत्ता भएका छन् । रोजगारिका लागि भारत पुगेका डोटी अछाम र कञ्चनपुरका १४१ जना वेपत्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निड्स नेपाल, कञ्चनपुरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अछामका […]
साउदीमा अलपत्र ४८ नेपाली नेपाल फर्कँदै
प्रकाशित मिति : २०७३, १४ मंसिर मंगलवार November 30, 2016
रोजगारिका लागि यहाँ अाएका ४८ नेपाली घर फर्न पाउने भएका छन् । साउदीमा कम्पनी बन्द भएर अलपत्र परेका ४८ नेपाली नेपाल फर्कन लागेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १ बर्ष पहिले क्षितिज इम्प्ल्योइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. काठमाण्डौबाट साउदीअरबको जेद्दामा रहेको Hijaj Gate International भन्ने कम्पनिमा आएका ४८ जना नेपाली कामदार र अन्य मेनपावरबाट आएका ६ जना […]
वैदेशिक रोजगारिमा ठगिनु भयो, वा अलपत्र पर्नुभयो १६६००१०९९९९ मा फोन गर्नुस
काठमाडौँ, मंसिर १३ । विदेशमा विभिन्न कारणले समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ कि अलपत्र परेका नेपालीहरूके गुनासो सुन्नका लागि सरकारले टोल फ्री नं. सञ्चालनमा ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले १६६००१०९९९९ नं. को टोल फ्री नं. वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरूको गुनासो सुन्न सञ्चालनमा ल्याएको विभागका प्रवक्त रमा भट्टरार्इले जानकारी दिइन् । पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्वरमा फोन गरेर […]